Macluumaadka Shirkadda - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
Qeybta Daaweynta Ilaha Hawada
Taxanaha B / C
Solenoid Valve & Qalabka Xakamaynta Hawada
Qalliinka Farsamada & Farsamooyinka Kale
Twin Rod iyo Tri-Rod dhululubo
Mid Taabasho Taabasho
Tubooyinka Pu & Hawada Cirka
Lamaane Degdeg ah
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd waxaa la aasaasay bishii Ogos 2004, waxay ku taalaa aaga warshadaha horumarinta dhaqaalaha ee YUEQING. Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag 24000 ㎡ ah, oo leh 5 saldhig oo wax soo saar leh in ka badan 300 oo shaqaale ah. Waa shirkad aan gobol ahayn oo ku takhasustay R&D, wax soo saarka, iibka iyo dayactirka adeegga qaybaha pneumatic.
Waxaan hadda bixinnaa shan alaabood oo pneumatic ah, sida daaweynta isha, qalabka pneumatic, silsiladaha, kalluumeysiga kalluumeysiga, tuubbada PU iyo qoryaha hawada, ku dhowaad 100 moodal iyo kumanaan shey oo adduunka oo dhan ah. Waxaan ka gudubnay shahaadada ISO 9001: shahaadada 2015, ISO 14001: 2015 shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka iyo CE markig ee EU. Sidoo kale waxaan nahay National Tech-Enterprise, Heerarka Qaranka ee soo koraya urur.
Waxaan had iyo jeer qaadannaa "Tayo Sare" sida ugu muhiimsan, qaybaha muhiimka ah dhammaantood waxaa lagu soo saaraa si otomaatig ah, taas oo si wax ku ool ah u damaanad qaadeysa tayada xasilloon ee qalabka.
Waqti dheer ayaan ku qaadnaa baaritaanka nolosha-dheer waxaanan ku adkeysaneynaa in shey kasta oo ka mid ah la hubiyo lana tijaabiyo ka hor inta aan la keenin. Dhanka kale, "Adeegga Kadib" waa ballanqaadkeenna, maxaa yeelay waxaan ognahay in macaamiisha ay si buuxda u fahmi doonaan dabeecaddeenna mas'uuliyadda ah ayna abuuri doonaan xaalad guuleysi badan iyo ka sii badanba.
Sanadihii la soo dhaafey, waxaan u dhoofinnay in ka badan 30 dal oo waxaan ka helnay jawaab celin wanaagsan. Mustaqbalka, waxaan fileynaa inaan la shaqeyn karno macaamiil aad iyo aad u badan oo aan fursad u heleyno inaan noqono shirkad hormuud ka ah adduunka. Waan kula koraynaa adiga.
Ku dadaal inaad hogaamiye ka noqoto warshadaha sambabaha ee Shiinaha
+ Kooxda maamulka & R & D
Shatiyada kala duwan
Iyada oo leh tayada heerka koowaad, adeegga heerka koowaad, sumcadda heerka koowaad iyo macaamiisha si ay u wada shaqeeyaan si loo abuuro naqshad ballaaran
Marka la eego shaqaalaynta dadka, shirkadeena had iyo jeer waxay raacdaa mabda'a ah "u jahaysan dadka" waxayna u hoggaansan tahay heerarka shaqo ee "dadku waxay ku dadaalaan inta ugu fiican, tirada ayaa lagu dabaqi karaa". Xulista ama dhiirrigalinta hibooyinka, waxaan marwalba ku adkeysanaa "dad karti leh, dad siman," The mediocrity "marna tixgelin mayno qaraabada, asxaabta, xiriirka, cilaaqaadka, iyo sooyaalkii shaqaalaynta dadka, laakiin waxaan diirada saarnaa awooda dhabta ah ee shaqaalaha , fiiro gaar ah u leh waxqabadka, waxbarashada fudud, shaqada adag, iyo da'da fudud, ka dib "cadaalad, cadaalad, iyo furfurnaan." Mabda'a tartanka, heer sare.
Marka laga hadlayo tababarka shaqaalaha, waxaan ku qiimeynaa wax ku oolnimada tababarka iyada oo loo marayo agabyo kala duwan oo wax lagu barto, baridda CD-ROM, iyo ku gudubista imtixaannada ka dib barashada. Waxaan dhiiri gelinaynaa oo aan dhiiri galinaynaa shaqaalaha dhiiri galiyay, waxaanan shaqaalaysiinaa khubaro u hadla shaqaalaha.
Soo saarida alaabada dadaalka leh Abuuritaanka Shirkad daryeel
Shaqada Fiican ee Adeegga Feejignaanta Maareynta Hawlkarnimada Ruuxu
Maya, 387, Wadada Jingba, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, Yueqing, Zhejiang, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Taageero farsamo:globalso Alaabada Kulul - Khariidadda bogga